Ankizy kiraro fanaovana kajy haben'ny
Ankizy kiraro fanaovana kajy haben'ny dia hanampy mba hamaritana ny kiraro ny ankizy habe, dia hampiova finoana ny Etazonia ny kiraro ny ankizy habe amin'ny teny Rosiana, ary koa manao kajy ny habeny ny taona sy ny santimetatra ny habe ny firenena samy hafa.
Kids kiraro fanaovana kajy habe amin'ny aterineto dia mamela anao mba hampiova finoana ankizy kiraro habe ny Eoropeanina, britanika, American (USA), Japoney habe na santimetatra. Ohatra, niova fo kiraro haben'ny avy Etazonia ho any Eoropa, avy any Eoropa na Etazonia kiraro haben'ny ny Japoney, UK sns koa ianao dia afaka mahita ankizy kiraro haben'ny tabilao, amin'ny lehibe sy ny kely habeny.
Rosiana Eoropa Anglisy (UK) Malagasy (USA) Anarana Centimeter
Shoes habe fanaovana kajy an-tserasera
Niova fo lehilahy, vehivavy, ary ny ankizy kiraro habe amin'ny firenena samy hafa, toy ny Eoropeanina, anglisy, amerikana (USA), Japoney habe na santimetatra.
Shoes ho an'ny ankizy
Misy lehibe sy kely habe ankizy kiraro tabilao ao amin'ny firenena samy hafa.
Mobile dika My kajy, Last nitsidika kajy, Contacts Cookies CalcProfi.com -tserasera fanaovana kajy © 2000-2020